Blepharitis (မျက်ခွံရောင်ရမ်းခြင်း) : ရောဂါလက္ခဏာတွေ၊ ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေနဲ့ ကုသမှုတွေအကြောင်း Hello Sayarwon
ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. Kaung Thar | ရေးသားသူ Dr. Aung Myat Thu
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်း နှင့် အိမ်သုံးဆေးမြီးတိုများ
Blepharitis (မျက်ခွံရောင်ရမ်းခြင်း။) ကဘာလဲ။
မျက်ခွံရောင်ရမ်းခြင်းဆိုသည်မှာ မျက်လုံးကို ဖုံးအုပ်ထားသော အပြင်ခွံရောင်ရမ်းခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ မျက်ခွံဆိုသည်မှာ မျက်တောင်ရှိရာနေရာနှင့် ဆက်နွယ်နေပြီး မျက်ခွံရောင်ရမ်းခြင်းသည် မျက်လုံး ၂ ဖက်လုံးကို သက်ရောက်စေသည်။ မျက်ခွံရောင်ရမ်းခြင်းသည် မျက်လုံးခြောက်သွေ့ခြင်းကို ဖြစ်စေသော အဓိက အကြောင်းရင်းလဲဖြစ်သည်။ မျက်ခွံရောင်ရမ်းခြင်းသည် မျက်တောင်အောက်ခြေရှိအဆီဂလင်များ ပိတ်ဆို့ရာတွင် ဖြစ်ပွားသည်။ ဒီအခြေအနေသည် မျက်လုံးကို ယားယံစေပြီး နီရဲစေသည်။ များစွာသော ရောဂါများ နှင့် အခြေအနေများသည် မျက်ခွံရောင်ရမ်းခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။
မျက်ခွံရောင်ရမ်းခြင်းသည် အများအားဖြင့် နာတာရှည်ဖြစ်တတ်ပြီး ကုသရန် ခက်ခဲတတ်သည်။ မျက်ခွံရောင်ရမ်းခြင်းသည် နေရထိုင်ရခက်တတ်စေပြီး မသိမသာလဲ ဖြစ်တတ်သည်။ သို့သော် မျက်ခွံရောင်ရမ်းခြင်းသည် မျက်လုံး၏ အမြင်အာရုံကို အမြဲထိခိုက်စေမှာမျိုး မဖြစ်စေပါ။ လူနာများ၏ မျက်လုံးများသည် ယားယံပြီး နှီရဲနေသော်လည် မျက်ခွံရောင်ရမ်းခြင်းသည် မကူးစက်တတ်ပါ။
Blepharitis (မျက်ခွံရောင်ရမ်းခြင်း။) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
မျက်ခွံရောင်ရမ်းခြင်းသည် လွန်စွာအဖြစ်များသည်။ အသက်အရွယ်တိုင်းတွင် ဖြစ်နိုင်သည်။ ဖြစ်စေနိုင်သော အချက်အလက်များကို ရှောင်ရှားခြင်းဖြင့် ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
အခြားပိုမိုသော အကြောင်းအရာများကို ဆရာဝန်နှင့် ဆွေးနွေးပါ။
Blepharitis (မျက်ခွံရောင်ရမ်းခြင်း။) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
မျက်ခွံရောင်ရမ်းခြင်းသည် မျက်စိကို ယားယံစေပြီး အမြင်အာရုံကို ထိခိုက်စေသောကြောင့် ပုံမှန်အားဖြင့် သိသာသည်။
နီရဲသော (သို့) ရောင်ရမ်းသော မျက်ခွံ။
မျက်လုံးတွင် ပူသောခံစားချက် ရခြင်း။
မျက်အလုံးအတွင်း (သို့) မျက်လုံးပေါ်တွင် တခုခုရှိနေသော ခံစားချက်ရခြင်း။
မျက်တောင်တွင် (သို့) မျက်လုံးထောင့်တွင် အပေါ်ခွံ တစ်လွှာရှိသလို ဖြစ်နေခြင်း။
Blepharitis (မျက်ခွံရောင်ရမ်းခြင်း။) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
မျက်ခွံရောင်ရမ်းခြင်းကို ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းရင်းကို အတိအကျမပြောနိုင်ပါ။ မျက်ခွံရောင်ရမ်းခြင်းကို ဖြစ်စေသော အကြောင်းရင်းများတွင်
-ဦးခေါင်းခွံ နှင့် မျက်တောင်တွင် ဗောက်ဖြစ်ခြင်း။
-မျက်ခွံရှိ အဆီဂလင်းများ ပိတ်ဆို့ခြင်း။
မျက်ခွံရောင်ရမ်းခြင်းတွင် အမျိုးအစား ၂ မျိုးရှိသည်။
-မျက်တောင်ရှိသော မျက်လုံးအပြင်ဘက်တွင် ဖြစ်ပွားသော မျက်လုံးအရှေ့ပိုင်းရောင်ရမ်းခြင်း။ မျက်ခုံး နှင့် မျက်တောင်တွင် ဖြစ်သော ဗောက် နှင့် မျက်လုံးအတွင်းတွင် ဖြစ်သော ဓါတ်မတဲ့မှုများသည် မျက်လုံးအရှေ့ပိုင်း ရောင်ရမ်းခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။
-မျက်လုံးအနောက်ပိုင်း ရောင်ရမ်းခြင်းသည် မျက်လုံး၏ အတွင်းထောင့်များတွင် ဖြစ်ပွားသည်။ မျက်တောင်၏ အမွှေးအိပ်ရှိ အဆီဂလင်းများ မကောင်းမွန်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
Blepharitis (မျက်ခွံရောင်ရမ်းခြင်း။) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
မျက်ခွံရောင်ရမ်းခြင်းကို ဖြစ်စေသောအချက်အလက်များစွာ ရှိပါသည်။ ဥပမာ :
-ဆေးကုသမှုများ၏ ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးများ။
-မကောင်းမွန်သော မျက်တောင်ရှိ အဆီဂလင်းများ။
-ဦးခေါင်းခွံ နှင့် မျက်ခုံးရှိ ဗောက်များ။
-မျက်နှာ နှင့် မျက်လုံးတစ်ဝိုက်တွင် သုံးသော မိတ်ကပ်များနှင့် ဓါတ်မတဲ့ခြင်းသည် မျက်ခွံရောင်ရမ်းခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။
Blepharitis (မျက်ခွံရောင်ရမ်းခြင်း။) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
မျက်ခွံရောင်ရမ်းခြင်းကို စမ်းသပ်စစ်ဆေးနိုင်သော စမ်းသပ်ချက်များတွင်
-ဆရာဝန်၏ မျက်ခွံ နှင့် မျက်လုံးကို သေချာစွာစမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း။
မျက်လုံးကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသော အထူးမှန်ဘီလူးများကို အသုံးပြုတတ်သည်။
-အရေပြားမှ နမူနာကို စစ်ဆေးရန် ယူခြင်း။ မျက်ခွံမှ အရေပြား (သို့) မျက်ခွံပေါ်ရှိ ဖြစ်နေသော အပေါ်လွှာမှ နမူနာယူသည်။ ထိုနမူနာမှ ဘတ်တီးရီးယား၊ မှို (သို့) ဓါတ်မတဲ့ရသည့် အဓိက အကြောင်းရင်းကို ရှာဖွေခြင်း။
Blepharitis (မျက်ခွံရောင်ရမ်းခြင်း။) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
အကယ်၍ မျက်ခွံရောင်ရမ်းခြင်းကို ခံစားနေရလျှင် အောက်ပါ အဆင့်များက မျက်လုံးကို ဆေးကြောဖို့ ကူညီနိုင်ပါသည်။
-သန့်ရှင်းသော အဝတ်စကို ရေနွေးစွတ်ပါ။
-ထို အဝတ်စကို လိမ်ပြီး မျက်ခွံပေါ်တွင် ၅ မိနစ်ခန့် တင်ထားပါ။
နွေးနေစေရန် အဝတ်စက ို လိုအပ်ပါက ရေနွေးပြန်စွတ်ပါ။
-ထိုသို့ ပြုလုပ်ခြင်းသည် ဖြစ်ပေါ်နေသော အပေါ်ခွံအလွှာ နှင့် အဆီအကြွင်းအကျန်များကို လျော့နည်းစေသည်။
ကူးစက်ပိုးရှိနေသော မျက်ခွံအတွက် ပိုးသတ်ဆေးများ ပေးသည်။
ပိုးသတ်ဆေးများသည် မျက်ခွံ၏ ကူးစက်ရောဂါပိုး လက္ခဏာများကို သက်သာစေသည်။ မျက်စဉ်းခတ်ဆေး၊ ခရင်မ် နှင့် လိမ်းဆေးရည် စသည်ဖြင့် ပုံစံမျိုးစုံရရှိနိုင်ပါသည်။
-ထိုသို့သော မျက်ခွံသို့ပေးသော ပိုးသတ်ဆေးများ အစွမ်းမပြပါက ဆရာဝန်သည် ပါးစပ်မှ သောက်ရသော ပိုးသတ်ဆေးများပေးလိမ့်မည်။
-ရောင်ရမ်းခြင်းကို သက်သောစေသော ဆေးများ။
Cyclosporine (Restasis) သည် မျက်ခွံရောင်ရမ်းခြင်းအတွက် သက်သာစေသော လိမ်းဆေးဖြစ်သည်။
-နဂိုဖြစ်နေသော ကျန်းမာရေးအခြေအနေများကို ကုသခြင်း။
မျက်ခွံရောင်ရမ်းခြင်းကို သက်သာစေမည့် လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်း နှင့် အိမ်သုံးဆေးမြီးတိုတွေက ဘာလဲ?
အောက်ပါ လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်း နှင့် အိမ်သုံးဆေးမြီးတိုများသည် မျက်ခွံရောင်ရမ်းခြင်းကို သက်သာစေသည်။
-မျက်နှာ ပုံမှန်သစ်ခြင်း။ ညမအိပ်ခင် လိမ်းထားသော မိတ်ကပ်များအား ဖယ်ရှားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ညစ်ပတ်သော လက် နှင့် မျက်လုံးကို မကိုင်မိစေရန်၊ ယားနေသော မျက်လုံးကို မပွတ်မိစေရန် သတိထားဖို့ လိုသည်။ မျက်လုံးကို ပွတ်ခြင်းသည် ရှိနေသော ကူးစက်ပိုးကို ပိုမိုပျံ့နှံ့စေသည်။
-မျက်တောင်နောက်ရှိ မျက်ခွံထောင့်သို့ မျက်ခွံပုံဖော်သည့် ရောင်ခြယ်ကို (eye Liner) မသုံးခြင်း။
-မျက်ခွံရောင်ရမ်းခြင်းကို စတင်ကုသနေသည် အချိန်များတွင် မိတ်ကပ်အသုံးမပြုခြင်းသည် နောက်ထပ်ယားယံခြင်းများကို မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးသည်။
-မိတ်ကပ်ပြန်သုံးမည် ဆိုပါက မျက်လုံးနှင့် တဝိုက်တွင် သုံးသော မိတ်ကပ်များကို အခြားတစ်မျိုး နှင့် အစားထိုးပါ။
http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/blepharitis/basics/treatment/con-20024605. Accessed March 2, 2017
http://www.webmd.com/eye-health/blepharitis. Accessed March 2,2017
http://www.healthline.com/health/blepharitis#Diagnosis5. AccessedMarch 2, 2017